DEG DEG:- Weerarkii Hoteel Dayax oo lasoo afjaray iyo raggii weerarka soo qaaday oo la dilay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Weerarkii Hoteel Dayax oo lasoo afjaray iyo raggii weerarka soo qaaday oo la dilay (SAWIRO)
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in goordhaw lasoo afjaray weerarkii saakay lagu qaaday Hoteel Dayax oo ku yaala agagaarka Isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho.
Rag hubeysan oo ka tirsan dagaalyahanada Al-shabaab ayaa saakay weerar culus ku qaaday Hoteel Dayax, halkaasi oo la sheegayo inay ku sugnaayeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed.
Weerarkaasi ayaa la sheegayaa inuu markiisa hore ku bilawday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu dhuftay iridka hore ee Hoteelka, waxaana markaasi kadib Hoteelka gudaha u galay ragga hubeysan oo tiradooda gaareyso illaa 5 qof.
Illaa 15 qof ayaa la xaqiijiyay inay weerarkaasi ku dhinteen, halka tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacantay.
Dhamaan dadka waxyeeladda kasoo gaartay weerarkaasi ayaa u badnaa dad shacab ah oo maraayay agagaarka Hoteelka iyo dadkale oo ku sugnaa xarumo ganacsi oo ku yaala nawaaxiga Hoteelka.
Dhinaca kale, sarkaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta Bulshoweyn u xaqiijiyay in ciidanka nabad-sugida qaranka ay goordhaw soo afjareen weerarkaasi, iyagoona dilay dhamaan raggii weerarka kusoo qaaday Hoteelka.
Xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa inay degnaayeen Hoteelka, balse lama oga in weerarkaasi ay waxyeelo kasoo gaartay iyo inkale.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in saraakiisha amniga ee dowladda Soomaaliya ay saxaafadda uga warbixiyaan qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarka lagu qaaday Hoteel Dayah ee magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntii, Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas, waxayna tilmaameen in dagaalyahano ka tirsan ciidamadooda ay gudaha u galeen Hoteelka Dayax, islamarkaana ay dileen wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan.